Sikasɛm: Ɔsom Bɛn na Wubetumi Anya Mu Awerɛhyem?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Sika—Ɛho Hia Ɔsom a Wowom no Sɛn?
Estelle * yɛ ɔbaatan a ne mma dɔɔso, nanso na ɔde wɔn nyinaa kɔ asɔre daa. Ɔka sɛ: “Meka kyerɛɛ me sɔfo sɛ mepɛ sɛ mete Bible ase paa.” Nanso ɔsɔfo no ne no ansua Bible da, na akyiri yi Estelle gyaee asɔre koraa. Ɔtoaa n’asɛm no so sɛ: “Asɔre mpanyimfo no kyerɛw me krataa, na na nea wɔrepɛ aka ara ne sɛ, sɛ asɔre na meremma a, sika de, metumi de aba. Adwene a ɛbaa me tirim ne sɛ, ‘Mankɔ asɔre koraa a ɛnhaw wɔn; me sika ara na wɔpɛ.’”
Angelina yɛ obi a ɔpɛ nyamesom paa, na ɔka sɛ: “Yɛkɔ asɔre a, wɔde kɛntɛn bɛfa yɛn anim mprɛnsa, na bere biara a wɔde bɛba no, ɛsɛ sɛ yɛde sika gu mu. Sika nko ara na wɔagye agye, agye ara. Ɛma mekae sɛ, ‘Minnye nni sɛ Onyankopɔn honhom wɔ wɔn so.’”
Asɔre asɔre a ɛwɔ wo mpɔtam hɔ no, ɛyɛ a wɔfa akwan bi so gye nkurɔfo ho sika? Nea wɔyɛ no, ɛne Bible hyia anaa?
Yesu a ɔde Kristosom bae no kae sɛ: “Munyaa no kwa, momfa mma kwa.” (Mateo 10:8) Bible mu asɛm de, yɛmfa sika ntɔ, na obiara repɛ bi a, ɛsɛ sɛ otumi nya.
Tete Kristofo no, na wɔyɛ dɛn tuatua asafo no ho aka?
Obiara yii ntoboa “sɛnea wasusuw wɔ ne komam, ɛnyɛ amemenemfe anaa ɔhyɛ so, efisɛ Onyankopɔn dɔ nea ɔtew n’anim ma.” (2 Korintofo 9:7) Ɔsomafo Paulo kae sɛ: “Nea ɛbɛyɛ na yɛremfa adesoa kɛse nto mo mu biara so no, yɛyɛɛ adwuma anadwo ne awia na yɛatumi aka Onyankopɔn asɛmpa no akyerɛ mo.” (1 Tesalonikafo 2:9) Paulo som adwuma mu no, ɔyɛɛ ntamadan de hwɛɛ ne ho.—Asomafo Nnwuma 18:2, 3.
Adan a Yehowa Adansefo taa hyia mu no, wɔfrɛ no Ahenni Asa, na ɛnyɛ adan akɛse biara. Wɔyɛ dɛn tuatua ho aka? Wɔmfa prɛte mfa obiara anim nnyigye sika, na wɔmfa envelope mma nkurɔfo sɛ wɔmfa sika nhyɛ mu. Mmom nea wɔyɛ ne sɛ, wɔde nnaka sisi Ahenni Asa so hɔ, enti sɛ obi ani sɔ ɔsom adwuma a ɛrekɔ so no a, otumi yi ntoboa gu mu a obiara nhu.
Ɔkwan bɛn paa na ɛsɛ sɛ yɛfa so tuatua ɔsom ho aka?
Nhoma a ekura wo yi, nea ɛyɛe a wotintimii a abedu ha yi, ne nyinaa yɛ sika. Nanso wɔmmɔ nneɛma a nkurɔfo retɔn ho dawuru biara wom na wɔmfa nsrɛsrɛ sika nso. Nea enti a wɔyɛ nhoma yi ara ne sɛ wɔbɛma nkurɔfo ahu Bible mu nokware.
Enti dɛn na wobɛka? Wohwɛ nhyehyɛe yi a, ɛne Yesu nsɛm a ɔkae ne nea tete Kristofo yɛe no hyia anaa?
^ nky. 2 Wɔasesa edin no bi wɔ nsɛm a edidi so yi mu.